ရေးသားသူ poemflower at Sunday, March 22, 2009
စိုင်းခမ်းထွန်း March 22, 2009 at 6:48 PM
အေးဗျာ ... အမေ့ကို လွမ်းလာပြီ ... အမေရှိတုန်း အမေ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားမှဗျနော် ....
mgnge March 23, 2009 at 6:08 AM
လို အပ်ချက်။။ လို အပ်ချက်..။ အင်း.. .................... /?
မိုးခါး March 23, 2009 at 6:45 AM
မင်းသက်ပိုင် March 23, 2009 at 8:31 AM
ဟုတ်တယ်.............. လိုအပ်ချိန်မှာ စက္ကူစုတ်လဲ တန်ဖိုးရှိပါတယ်. .....စိန်လက်စွပ်သာဆို ဘယ်လ..မီးမွှေးလို့ရမလဲနော်
My Diary March 23, 2009 at 2:05 PM
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့က နားမလည်ကြဘူးနော်။
အားလုံး နားလည်ရင်ကောင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အင်း.. မှတ်သားစရာပါပဲ။ တကယ်က အမေအိုအတွက် အလိုအပ်ဆုံးက သားတွေ အနားမှာနေပေးဖို့လို့ ထင်တာပဲ။
Welcome March 24, 2009 at 8:10 AM
လူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲက လိုအပ်ချက်ကို ကြိုသိမြင်နိုင်ရင် ကောင်းသားနော်။